दुखाइ कसरि कम गर्ने ? यस्ता छन् घरेलु उपाय – Neewz
दुखाइ कसरि कम गर्ने ? यस्ता छन् घरेलु उपाय
सानो तिनो दुखाइ बाट हैरान हुनुहुन्छ ? आज हामीले ल्याएका छौ घरेलु उपचार जस्तै घरमै उपलब्ध भएका कुराबाटै आफ्नो दुखाइ कम गर्न सक्नुहुन्छ । दुखाइ पनि धेरै किसिमका हुन्छन त्यसैले तपाइले नाजुक अवस्थामा भने हस्पिटल जानु पर्ने हुन्छ । यसप्रकार छन् ति खाने कुरा जुन कस्तो दुखाइ कम गर्नका लागि कुन खानेकुराको प्रयोग गर्ने ;
NeewzAugust 18, 2017
‘निष्ठूरी भगवानले बास त लगेलगे, जिउने आश पनि लगे’
अन्तिमपटक जाँच तथा सर्वेक्षण गर्न गाउँगाउँमा खटिए इञ्जिनियर
‘बाढीमा बुबाआमा गुमाएँ, १५ सय राहत पाएँ !’
मोहना र घुराहा नदीले खेत बगायो, धान काटेर गाईबस्तुलाई
गोरखाका लापू र काशीगाउँमा खाद्य असुरक्षा जोखिम हट्यो